Beckham, Pique iyo shaqsiyaad kale caan ah oo lagu casuumay arooska Ramos… (Miyuu qeyb ka yahay Cristiano?) – Gool FM - Idman News
Beckham, Pique iyo shaqsiyaad kale caan ah oo lagu casuumay arooska Ramos… (Miyuu qeyb ka yahay Cristiano?) – Gool FM
(Madrid) 13 June 2019. Wargeyska “Dailymail” ee dalka England ayaa sheegy in Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos uusan ugu yeerin saaxiibkiis hore Los Blancos Cristiano Ronaldo ka qeyb galka xaflada arooska isaga iyo gacalisadiisa ee Pilar Rubio, oo la qorsheenayo inuu ka qabsoomo magaalada Sevilla 15-ka June.
Ramos ayaa qaban qaabinaya inuu qabto xaflad aad u balaaran maalinta uu sida rasmiga ah u guursan doono gacalisadiisa Pilar Rubio, iyadoo ay kasoo qeyb gali doonaan 500 oo qof ay ku casuumeen Kabtanka kooxda Real Madrid iyo gacalisadiisa.
Laakiin sida warbixinta lagu xusay liiska shaqsiyaadka lagu casuumay xaflada ayaan qeyb ka ahayn magaca Cristiano Ronaldo, inkastoo ay Ramos mudo dhan 9 sano saaxiibo ku soo ahaayeen garoonka Santiago Bernabéu, iyagoo ay si wada jir ah ugu guuleystay koobabka maxaliga iyo Yurub, kahor inta uusan Cristiano u dhaqaaqin Juventus xili ciyaareedka 2018-2019.
Ramos ayaa martiqaaday shaqsiyaad badan gaar ahaan ciyaartoyda kubadda cagta, sida David Beckham iyo xaaskiisa Victoria Beckham, Gerard Pique iyo xaaskiisa Shakira, inkastoo daafaca Barcelona uu inbadan hadalo ku weeraray kooxda Real Madrid.
Sidoo kale xaflada arooska Ramos iyo Pilar Rubio waxaa la filayaa inay kasoo qeyb galaan dhamaan ciyaartoyda Real Madrid iyo tababare Zinedine Zidane iyo hogaamiyaasha kooxda uu ugu horeeyo Florentino Pérez.
Mention soo dheh qof tagero Manchester United oo cawa saan camal u gan banaayo…
Halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo oo laabta u qaboojiyay taageerayaasha kooxda Real Madrid – Gool FM
Previous Previous post: MUqdisho
Next Next post: Goobjoog oo warbixin xiisa badan ka diyaarisey Dowladda midowga Ardeyda Jamaacadda City, wareysina la yeelatey Madaxweyne Mohamed Kaafi.